Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI)(Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI)) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एफएनसीसीआईलाई जिल्लानगर उपाध्यक्षको चुनाव गराउने बाटो खुल्ला
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)लाई रिक्त जिल्ला नगर उपाध्यक्षको नयाँ निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार जिल्लानगरतर्फका निलम्बित उपाध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्दै महासंघलाई नयाँ निर्वाचन गराउने बाटो खोलिदिएको हो...
‘एफएनसीसीआईलाई कमजोर बनाउँछु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ’
भवानी राणा-अध्यक्ष-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई) उद्योग वाणिज्य महासंघलाई देशका उद्यमी, व्यवसायी, सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनेर बुुझ्छन् । तपाई महासंघलाई नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनुुहुन्छ । महासंघको नेतृत्व गर्दै गर्दा जे–जस्तो प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, एकवर्षको अवधिमा के–के पूरा भए? -महासंघको ५०...
सर्वोच्चले एफएनसीसीआई नेतृत्वलाई सोध्यो–‘तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने ?’
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व कानूनी फन्दामा परेको छ । बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले विरोध गर्दागर्दै अदालतको विचाराधीन बिषयलाई लत्याउँदै महासंघको नेतृत्वले फागुन २५ गते जिल्ला नगर उपाध्यक्षको नयाँ निर्वाचन गराउने तयारी थालेपछि त्यसको विरोधमा परेको उजुरीमा अदालतले महासंघलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । उद्योग...
एफएनसिसीआईमा छायाँ अध्यक्षको निरकुंश शासन: भवानीलाई पंगु बनाइँदै !
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष को हो ? यो प्रश्न भूइँमा खस्न नपाउँदै धेरैले भन्लान्: भवानी राणा । महासंघको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्ष बनेकी राणाको पक्षमा आउने यो उत्तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो छ । अर्थात, उद्योग वाणिज्य महासंघ पछिल्लो समय राणाले होइन, एक छायाँ अध्यक्षले चलाउने गरेका छन् । अध्यक्षलाई पाखा लगाएर आफ्नो...
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुने
काठमाडौँ । ‘नेपाली वस्तु प्रवद्र्धन, समृद्ध नेपाल निर्माण’ भन्ने मूलनाराका साथ सातौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी फागुन २४ देखि २८ गतेसम्म सो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । महासंघद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा...
ओलीले एनसीसीलाई ‘बिग रेसपोन्स’ गरेपछि एफएनसीसीआई नेतृत्व तनावमा !
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघ(FNCCI)को कमजोर नेतृत्वसँग रुष्ट भएर देशभरका उद्योगी व्यवसायीले वैकल्पिक संगठनको खोजी गरिरहेको बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(NCC)ले एकपछि अर्को टक्कर दिइरहेको छ । केही दिनअघि भन्सार दिवसको अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासंघले सहसचिवलाई मात्र उपस्थित गराएर कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेको थियो, तर सोही दिन चेम्बरले...
कमजोर नेतृत्वका कारण वाणिज्य महासंघ संकटमा: एनसीसीपछि सिएनआईको टक्कर
काठमाण्डौ । कमजोर नेतृत्वका कारण पछिल्लो समय संकटमा फस्दै गएको उद्योग वाणिज्य महासंघ सांगठनिक रुपमा समेत थप कमजोर हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पछिल्लोकाल केही निश्चित समूहको मनोमानी चलेसँगै असन्तुष्टहरुले समानान्तर संगठन बिस्तारमा ध्यान दिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन मानिएको यो संस्था धराशायी बनेको हो । नाममा...
एफएनसिसीआईका पूर्वअध्यक्ष संगठितः ओलीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । नेपालको निजि क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु संगठित भएका छन् । पूर्व अध्यक्षहरुले ‘नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष परिषद’ गठन गरेका हुुन् । परिषदले आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भक्तपुर बालकोट स्थित निवासमा भेटेर छलफल गरेको छ । परिषदका तर्पmबाट...
उद्योग परिसंघ र वाणिज्य महासंघबीचको तिक्तता अन्त, एउटै मञ्चमा देखिए दुई अध्यक्ष
काठमाण्डौ । ‘तपाईहरुले कत्तिको विचार गर्नुभयो कुन्नि, आज यहाँ केही नयाँ हुँदैछ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)को नेतृत्व एउटै मञ्चमा देखिएको छ । यो अभूतपूर्व छ ।’ कुनै बेला एफएनसीसीआईबाट असन्तुुष्ट बनी सिएनआई स्थापना गरेका सो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा फोब्र्सका अर्बपति सूचिमा पर्न सफल...
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले कामचलाउ सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नसमेटिने र पूरक बजेट छिट्टै ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा विकास बजेटको न्यून खर्चले तरलताको समस्या बढ्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राजधानीमा भएको महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले विकास बजेटको न्यून...
शेखर गोल्छाको पोल्टामा ६३.३० प्रतिशत मतको शानदार जित
काठमाण्डौ । गोल्छा समूहको पुरानो सपना साकार पार्दै ६३.३० प्रतिशत मत पाउँदै शेखर गोल्छा नेपाली उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भावी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । महासंघको केही महिनाअघि राजधानीमा सम्पन्न विशेष साधारणसभाले विधान संसोधन गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो...
गोल्छाले मारे बाजी, प्रधानको हार स्वीकार
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघको मतगणना नसकिँदै किशोर प्रधानले हार स्वीकार गरी प्रत्यासी शेखर गोल्छालाई बधाईं दिएका छन् । जिल्लानगर, वस्तुुगतका अधिकांश सदस्यहरुमा गोल्छा समूहका उम्मेद्वार विजयी भएपछि र यी समूहमध्ये ५० प्रतिशत मतभार रहने जिल्लानगरतर्फ समेत गोल्छा भन्दा पछाडि परेपछि प्रधानले हार स्वीकार गरेका हुुन् । प्रधान...
जिल्लानगर उपाध्यक्षमा प्रमोद श्रेष्ठ, प्रधान समूहको जोगियो इज्जत
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको ताजा मत परिणाम अनुसार प्रधान समूहको इज्जत जोगाउँदै जिल्ला नगर उपाध्यक्षतर्फ प्रमोद श्रेष्ठले जित हासिल गरेका छन् । उनले गोल्छा समूहका दिनेश श्रेष्ठलाई ५ मतले पराजित गर्दै जित हासिल गरेका हुुन् । प्रमोदले ५३ मत ल्याए भने श्रेष्ठले ४८ मत । जिल्लानगरतर्फको १८ सदस्यमा १६ जनामा गोल्छा...
अञ्जन श्रेष्ठको चित्त नबुझाउँदा किशोर प्रधानलाई दुर्भाग्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा पनि हार
काठमाण्डौ । सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको वस्तुुगतमै किशोर प्रधान समूहले नराम्रो पराजय व्यहोर्नु परेको छ । प्रधान समूहले वस्तुुगततर्फ आफूहरुको निकै राम्रो मत रहेको बताउँदै आएको थियो । तर सोही समूहतर्फको निर्वाचन मत परिणाम आउँदा उसले लज्जाजनक हार व्यहोर्नुपरेको हो । वस्तुुगत सदस्यमा बहुसंख्यकमा जित हासिल गरेको गोल्छा समूहले...
जिल्लानगर र वस्तुगतमा गोल्छा प्यानलको फराकिलो जित(विजेताको सूचिसहित)
काठमाण्डौ । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा शेखर गोल्छा समूह राम्रो मतका साथ विजयी हुने लक्षण देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म गणना भइसकेका जिल्लानगर र वस्तुुगततर्फको सदस्यहरुमा गोल्छा समूहले उत्साहजनक परिणाम हात पारेको हो । गोल्छा प्यानलले जिल्लानगरतर्फका १८ कार्यकारिणी सदस्यमध्ये १६ जनालाई जिताउने सफलता पाएको छ भने...
एनएमबिले ल्यायो ‘एनएमबि इन्भेस्टर सेभिङस्’ योजना, लगानीकर्तालाई यस्ता छन् अवसर
समृद्धि फाइनान्सले २ः१ अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति
अख्तियारद्वारा सर्वोत्तमको सेयर कारोबारबारे अनुसन्धान सुरु, सेबोनसँग कागजपत्र माग
झिनो अंकले बढ्यो बजार, यसका कारण हाइड्रोमा आकर्षण